သင်နှင့် သင့်မိသားစုကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အာမခံအကြောင်းလေ့လာပါ
Manulife ပညာရေး အသက်အာမခံ
ငွေကို စမတ်ကျကျသုံးပါ - ၂၀၂၀ မှာ ပိုက်ဆံ(ငွေ)ကို ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသိထားသင့်သည့် အာမခံထားရှိခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ
Manulife Myanmar မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် PPE ဝတ်စုံများ လှူဒါန်း
၂၀၂၀ အတွက် Manulife မှ ဝန်ထမ်းများအား ကျေးဇူးတင်ရှိသောအားဖြင့် “Thank You Day” ပိတ်ရက်ပေးသွားမည်
Manulife မှ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုအား ရန်ကုန်မီးရထားအဆောက်အအုံကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းဖြင့် စတင်
Manulife မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစုများ၏ အနာဂတ်အား ကာကွယ်ပေးမည့် အာမခံပေါ်လစီနှစ်ခုကို စတင်မိတ်ဆက်
Manulife Cambodia ၏ Chairman နှင့် Manulife Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Robert Elliott က ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်ထံမှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုလက်ခံရရှိ
Manulife Myanmar က နိုင်ငံတွင်း COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ကုသရေးအတွက် Oxygen Concentrator စက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လှူဒါန်း
၂၃ ဇွန် ၂၀၂၀
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါပျံ့နှံ့လာမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိုးရိမ်မှုတွေ၊ မရေရာမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါဆိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဥ်ဘဝ၊ ၀င်ငွေ အသုံး စရိတ်နဲ့ မိသားစုအနာဂတ်စီမံကိန်းတွေကို ပြန်လည်စဥ်းစားချင့်ချိန်လာရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဥ်ဘဝ လည်ပတ်ပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ပညာသင်ယူပုံတွေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရပြီးတော့ မိသားစုကျန်းမာရေးနဲ့လုံခြုံမှုအတွက် အချိန်တိုင်းစိုးရိမ်ပူပင်နေရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ အရာတွေရှိနေတာ မှန်ပေမယ့် တစ်ချို့အရာတွေကိုတော့ အစီအစဥ်ချပြီး ထိန်းချုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ လက်ရှိကပ်ဘေးကာလက ကျွန်တော်တို့ ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ အိမ်မှာပဲအနေများကြတာဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ပိုထွက်လာမှာပါ။ ဒီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ကိုယ့် ကျန်းမာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ အာမခံကိစ္စရပ်တွေအတွက် ကြိုတင်စီမံကိန်းချပြီး အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ အသုံးချသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ဟာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အွန်လိုင်းကနေရှာဖွေလေ့လာပြီး မိသားစုဝင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အခွင့်အရေးပါပဲ။
ဥပမာပြောရရင် ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အာမခံအစီအစဉ်ထားရှိခြင်းနဲ့ အာမခံအကြောင်း သေချာစွာလေ့လာဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိရှိထားပြီး မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ် အခြေခံကာ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကအချက်တစ်ချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မေးသင့်တဲ့ အဓိက မေးခွန်းများ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သင့်မိသားစုကို သင်ကာကွယ်ထိုက်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့နောင်ရေး စိတ်အေးရစေဖို့အတွက် အာမခံထားရှိသင့်ပါတယ်။။ ချစ်ရသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ အပူအပင်မရှိ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ မိသားစုအတွက် ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ သင် ရှာ​​ဖွေစုဆောင်း​​နေတုန်းမှာ အာမခံအစီအစဉ်တွေက သင့်မိသားစုကို အ​ြေခအနေအမျိုးမျိုးကနေ ကာကွယ်​ပေးနေမှာပါ။
ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ကားအာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ ခရီးသွားအာမခံစတဲ့ အာမခံအမျိုးအစားများစွာထဲက ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့မိသားစုတစ်ခုအနေနဲ့ အသက်အာမခံနဲ့ပညာရေးအာမခံ ၂ မျိုးကို အဓိကအာရုံစိုက်ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။ အသက်အာမခံကတော့ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့် သင်နဲ့သင့်မိသားစု ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိရလေအောင် ငွေကြေးအားဖြင့်ကာကွယ်ပေးသွားမှာပါ။ ပညာရေးအာမခံကတော့ သင့်ကလေးရဲ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ပညာရေးစရိတ် စုဆောင်းရာမှာသင့်ကို ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံဈေးကွက်တစ်ဖန်ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီအများအပြား ဝင်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူ အာမခံအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ တစ်ချို့အာမခံတွေက ဘဏ်တွေကနေ တည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီသီးသန့်ဖြစ်တဲ့ Manulife ထံကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီက အာမခံလုပ်ငန်းမှာ သက်တမ်းဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ? ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်တမ်းတွေကရောဘယ်လိုရှိလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာအာမခံလုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုကောင်းကျိုးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရမယ့်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလိုရွေးချယ်ရာမှာ ကုမ္ပဏီက ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရပ်တည်ခဲ့ပြီလဲ၊ ဘယ်သူပိုင်တာလဲ၊ ကုမ္ပဏီကအလေးထားတဲ့ တန်ဖိုးတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။
အာမခံထားရှိဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ သေချာမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး အာမခံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းပြပေးမယ့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုရှာပါ။ ပြီးတဲ့နောက် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့အာမခံကုမ္ပဏီကိုလေ့လာပါ။ အာမခံကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အကြံပေးချက်တွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး အာမခံအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်လာမလဲ မသေချာမရေရာတဲ့အချိန်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ အားငယ်မှုတွေ ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာသိထားရပါမယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီး အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် စဥ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် ကျန်းမာအောင်နေပါ။
Thomas Huxley ပြောခဲ့တဲ့ “Try to learn something about everything and everything about something!” ဆိုတဲ့အတိုင်း “အကြောင်းအရာတိုင်းကို နည်းနည်းတော့ သိအောင်လုပ်ပါ။ အဲ့ဒီထဲကမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိအောင်လုပ်ပါ”။
နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ Manulife အာမခံကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိသားစု​​တွေအတွက် အာမခံထားရှိခြင်း အသိပညာတွေကို အကောင်းဆုံးဝေမျှပေးနိုင်မယ့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အသင့်လျော်ဆုံး အာမခံအမျိုးအစား၊ သင်ရယူနိုင်မယ့်အာမခံတွေနဲ့ အာမခံသဘောတရားတွေကို Manulife ရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေက သေချာရှင်းပြပေးမှာပါ။
Manulife ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ပေါ်လစီကို ရောင်းချခဲ့ခြင်းနဲ့အတူ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို ဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာ့စျေးကွက်ထဲ  ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်ကစလို့ Manulife က မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံလောကရဲ့ မူဝါဒချမှတ်သူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးအသုံးချရမလဲဆိုတာကို အမြဲမျှဝေခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။
Manulife Myanmar အကြောင်း https://www.facebook.com/Manulife.Myanmar/ မှာ ၀င်ရောက် လေ့လာလိုက်ပါ။
ပါရမီရှင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် မတူကွဲပြားမှုများအပေါ် အားပေးလက်ခံခြင်း
©၂၀၁၉ Manulie၊ ရုံးချုပ်: ၁၆လွှာ၊ ကန်သာယာရုံးခန်းတာ၀ါ၊ ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့်ဦးအောင်မြတ်လမ်း‌‌ထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
ဆက်သွယ်ရန်: ၀၉-၇၆၅ ၄၆၇ ၁၀၀